Football Khabar » आज बार्सिलोना र डर्टमुन्डको रोमाञ्चक भिडन्त हुँदै : के गर्ला बार्सिलोनाले ?
आज बार्सिलोना र डर्टमुन्डको रोमाञ्चक भिडन्त हुँदै : के गर्ला बार्सिलोनाले ?
युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबल प्रतियोगितामा आज एक बहुप्रतीक्षित खेल हुँदैछ । जहाँ स्पेनिस बार्सिलोना र जर्मन क्लब बोरुसिया डर्टमुन्ड समूह चरणअन्तर्गत पाँचौं तथा दोस्रो लेगको खेल खेल्दैछन् । यो खेलका लागि बार्सिलोनाले डर्टमुन्डलाई आफ्नो घरेलु मैदानमा स्वागत गर्दैछ । खेल नेपाली समयअनुसार राति १ः४५ बजेबाट क्याम्प नोउ रंगशालामा सुरु हुनेछ ।
आजको खेल बार्सिलोना र डर्टमुन्ड दुवैका लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । दुवै टिम अन्तिम १६ मा जान आजकै खेललाई निर्णायक बनाउने योजनामा छन् । समूह ‘एफ’मा हाल बार्सिलोना ४ खेलबाट ८ अंक जोडेर शीर्ष स्थानमा छ । डर्टमुन्ड ७ अंकसहित दोस्रोमा छ भने इटालियन इन्टर मिलान ४ अंकसहित तेस्रो स्थानमा छ ।
हालको अवस्थामा अर्को चरणमा स्थान पक्का गर्न बार्सिलोनालाई मात्रै १ अंक आवश्यक छ । त्यसका लागि उसले आज राति डर्टमुन्डसँग आफ्नो घरमा कम्तीमा बराबरी खेले पनि काफी हुन्छ । त्यस्तै, यता डर्टमुन्डले पनि आज बार्सिलोनालाई उसकै घरमा हरायो भने अन्तिम १६ नजिक पुग्नेछ ।
आज बार्सिलोना र डर्टमुन्ड भिड्दा अर्को खेलमा इन्टर मिलान र स्लाभिया प्रहाको खेल हुनेछ । यदि आज डर्टमुन्ड विजयी भयो र अर्को खेलमा मिलान विजयी भयो भने अन्तिम १६ मा जाने दुई टोलीको टुंगो अन्तिम खेलबाट मात्रै लाग्नेछ । अन्तिम खेलमा बार्सिलोना र मिलान भिड्दा अर्को खेलमा डर्टमुन्ड र स्लाभिया भिड्नेछन् । तुलनात्मक रूपमा बार्सिलोना बढी दबाबमा छ । किनभने, उसका दुईटै खेल कठिन छन् ।
तसर्थ बार्सिलोना आज आफ्नो घरमा हुने यो खेलमा स्पष्ट जित निकालेर अन्तिम १६ को यात्रा तय गर्न चाहन्छ । समूह विजेता हुन पनि बार्सिलोनालाई आजको जित आवश्यक छ । आज डर्टमुन्डलाई हराए बार्सिलोना मिलानसँग अन्तिम खेल खेल्नुअघि नै समूह विजेता बनेर अर्को चरण जानेछ ।
यता, डर्टमुन्ड आज बार्सिलोनाको घरमा उत्रिँदा चर्को दबाब लिएर उत्रिनेछ । यसअघि डर्टमुन्डको घरमा भएको पहिलो लेग ०–० मा सकिएको थियो । डर्टमुन्ड आज बार्सिलोनाकै घरमा गोलको खडेरी तोडेर ३ अंक खोस्ने दाउमा छ । आज क्याम्प नोउमा डर्टमुन्डको युवा टोली बार्सिलोनाका लागि ठूलो चुनौती बन्न सक्छ ।
यता, बार्सिलोनासँग आजको खेलमा सबैजसो प्रमुख खेलाडी उपलब्ध छन् । कप्तान लिओनल मेस्सी, लुइस स्वारेज, उसामान डेम्बेले, एन्टोनी ग्रीजम्यानसहितका खेलाडीलाई प्रशिक्षक अर्नेस्टो भाल्भर्डेले प्रयोग गर्नेछन् ।
प्रकाशित मिति ११ मंसिर २०७६, बुधबार ११:०६